အာရှက ဘာမြူဒါတြိဂံမှာ ၁၁ရက်ကြာပျောက်ဆုံးခဲ့ပေမယ့် ကျင်ငယ်ရေသောက်ပြီး အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ငါးဖမ်းသမား - Lifestyle Myanmar
Home News အာရှက ဘာမြူဒါတြိဂံမှာ ၁၁ရက်ကြာပျောက်ဆုံးခဲ့ပေမယ့် ကျင်ငယ်ရေသောက်ပြီး အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ငါးဖမ်းသမား
အာရှက ဘာမြူဒါတြိဂံမှာ ၁၁ရက်ကြာပျောက်ဆုံးခဲ့ပေမယ့် ကျင်ငယ်ရေသောက်ပြီး အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ငါးဖမ်းသမား
Nian Xinghua ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္တံငါသည္တစ္ေယာက္ဟာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး နာမည္ႀကီးတဲ့ အာရွရွိဘာျမဴဒါႀတိဂံဧရိယာမွာ ၁၁ ရက္ၾကာတဲ့အထိ ေမ်ာပါေနခဲ့ၿပီးေနာက္ အံ့ဖြယ္ရာအသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ Nian Xinghua ဟာ အသက္ ၅၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဖက္ပိုင္း ကမ္း႐ိုးတမ္းမွာရွိတဲ့ Pingtan လို႔ေခၚတဲ့ေနရာမွာ ငါးဖမ္းေနရင္းနဲ႔ ေမလ ၁၀ရက္ေန႔က ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း People’s Daily သတင္းစာရဲ႕ အဆိုအရ သိရွိရပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ ေပႏွစ္ဆယ္ခန္႔ရွည္လ်ားတဲ့ေလွနဲ႔ ငါးဖမ္းေနရင္း ႐ုတ္တ႐ုတ္မိုးေမွာင္က်ၿပီးေနာက္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈကို ႀကဳံေတြ႕ရေၾကာင္း ျမဴေတြနဲ႔မို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လုံးဝမျမင္ရေတာ့ေၾကာင္း သူကသူ႔ရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာျပပါတယ္။ ပိုၿပီးကံဆိုးတာက သူ႔ရဲ႕မိုဘိုင္းဖုန္းဟာ ဘတၱရီကုန္သြားခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္လို႔ မရေတာ့သလို ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေလွမွာလည္း ဆီကုန္သြားခဲ့ပါတာေၾကာင့္ Nian ဟာ လက္ရွိအေျခအေနအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ပါဘူး။
ဒီလိုေပ်ာက္ကြယ္သြားမႈကို အားလုံးကလည္း အာရွရဲ႕ဘာျမဴဒါႀတိဂံမွာ ေမ်ာပါေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ အဆိုပါဧရိယာဟာ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားမွာရွိေနၿပီး ေလတိုက္ႏႈန္းျမင့္မားၿပီး လႈိင္းႀကီးတဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုးအရင္ကတည္းက ဘာျမဴဒါႀတိဂံကို ေၾကာက္႐ြံ႕တာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အဆိုပါေနရာက စိုးရိမ္ခဲ့ၾကတာပါ။ Nian ဟာ ပိတ္မိၿပီး ၂ ရက္အတြင္းမွာပဲ သူ႔ရဲ႕ရိကၡာနဲ႔ ေရေတြကုန္သြားတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕က်င္ငယ္ေရနဲ႔ ငါးစာေတြကိုသာ စားၿပီး အသက္ဆက္ခဲ့ရပါတယ္။
သူဟာ အျခားသေဘၤာတစီးစီး သူ႔ကိုေတြ႕ေစဖို႔ ေန႔ဖက္မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အိပ္ရင္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ညခင္းဖက္မွာေတာ့ တညလုံးေလွကိုမပ်က္စီးေစဖို႔ လႈိင္းလုံးေတြၾကား ကာကြယ္ခဲ့ရင္းနဲ႔ပဲ ၂၁ ရက္မနက္မွာေတာ့ အျခားသေဘၤာတစီး သူ႔ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အသက္ကယ္ေလွနဲ႔ကယ္တင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အသက္ေဘးကရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕မိသားစုေတြကေတာ့ သူ႔ကိုေသၿပီဆိုၿပီး အသုဘအတြက္စီစဥ္ေနၾကေပမယ့္ ၂၃ ရက္ေန႔အေရာက္မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕မိသားစုေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ပုံမွန္အေျခအေနရွိေနၿပီး ယခုလိုရဲရင့္စြာရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အားလုံးကဝိုင္းဝန္းခ်ီးက်ဴးလွ်က္ ရွိၾကပါတယ္။
Images via People’s Daily
Nian Xinghua ဆိုတဲ့ တရုတ်တံငါသည်တစ်ယောက်ဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ အာရှရှိဘာမြူဒါတြိဂံဧရိယာမှာ ၁၁ ရက်ကြာတဲ့အထိ မျောပါနေခဲ့ပြီးနောက် အံ့ဖွယ်ရာအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ Nian Xinghua ဟာ အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဖက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတမ်းမှာရှိတဲ့ Pingtan လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာ ငါးဖမ်းနေရင်းနဲ့ မေလ ၁၀ရက်နေ့က ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း People’s Daily သတင်းစာရဲ့ အဆိုအရ သိရှိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပေနှစ်ဆယ်ခန့်ရှည်လျားတဲ့လှေနဲ့ ငါးဖမ်းနေရင်း ရုတ်တရုတ်မိုးမှောင်ကျပြီးနောက် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကို ကြုံတွေ့ရကြောင်း မြူတွေနဲ့မို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝမမြင်ရတော့ကြောင်း သူကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါတယ်။ ပိုပြီးကံဆိုးတာက သူ့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဟာ ဘတ္တရီကုန်သွားခဲ့ပြီး
ဆက်သွယ်လို့ မရတော့သလို ကြာလာတာနဲ့အမျှ လှေမှာလည်း ဆီကုန်သွားခဲ့ပါတာကြောင့် Nian ဟာ လက်ရှိအခြေအနေအတွက် ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါဘူး။
ဒီလိုပျောက်ကွယ်သွားမှုကို အားလုံးကလည်း အာရှရဲ့ဘာမြူဒါတြိဂံမှာ မျောပါနေတာဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အဆိုပါဧရိယာဟာ ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားမှာရှိနေပြီး လေတိုက်နှုန်းမြင့်မားပြီး လှိုင်းကြီးတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ဘာမြူဒါတြိဂံကို ကြောက်ရွံ့တာကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အဆိုပါနေရာက စိုးရိမ်ခဲ့ကြတာပါ။ Nian ဟာ ပိတ်မိပြီး ၂ ရက်အတွင်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ရိက္ခာနဲ့ ရေတွေကုန်သွားတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ကျင်ငယ်ရေနဲ့ ငါးစာတွေကိုသာ စားပြီး အသက်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။
သူဟာ အခြားသင်္ဘောတစီးစီး သူ့ကိုတွေ့စေဖို့ နေ့ဖက်မှာမျှော်လင့်ချက်နဲ့ အိပ်ရင်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ညခင်းဖက်မှာတော့ တညလုံးလှေကိုမပျက်စီးစေဖို့ လှိုင်းလုံးတွေကြား ကာကွယ်ခဲ့ရင်းနဲ့ပဲ ၂၁ ရက်မနက်မှာတော့ အခြားသင်္ဘောတစီး သူ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အသက်ကယ်လှေနဲ့ကယ်တင်ခဲ့တာကြောင့် အသက်ဘေးကရှင်သန်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကတော့ သူ့ကိုသေပြီဆိုပြီး အသုဘအတွက်စီစဉ်နေကြပေမယ့် ၂၃ ရက်နေ့အရောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ပုံမှန်အခြေအနေရှိနေပြီး ယခုလိုရဲရင့်စွာရှင်သန်လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အတွက် အားလုံးကဝိုင်းဝန်းချီးကျူးလျှက် ရှိကြပါတယ်။
Previous articleLamborghini ပြိုင်ကားမောင်းပြီး ဂေါ်နေတဲ့ အသက် ၇၀ကျော် အဖွားအို ၂ယောက်
Next articleသင့်ဘေဘီလေးအတွက် အစားအစာကို ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
အဝါရောင်ကို နှစ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ အံ့ဩစရာအရည်အချင်းကောင်းများ
Dmo aung - March 29, 2020
ကမ္ဘာမှာ လူကြိုက်အနည်းဆုံးအရောင်ဟာ အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဝါရောင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ တောက်ပတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ အံ့အားသင့်စေတဲ့ အချက်တချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သင်ယူလေ့လာဖို့ကို ပျော်ရွှင်တတ်ကြပြီး တတ်သိထားတာတွေကို ဝေငှပေးတတ်ကြပါတယ်
အနံ့ခံမှုစွမ်းရည်တွေနဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေရဲ့ ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှုများ
သင့်မိသားစုထဲမှာ အိန်ဂျယ်ကလေးဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
တစ်ယောက်တည်း (ALONE) နေခြင်းက ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ရနိုင်လဲ?
စားလို့ကောင်းပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အစားအစာများ
လူတိုင်းရဲ့ အကြည့်တွေကို သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အလွန်အကျွံဆွဲဆောင်မှုမြင့်မားလွန်းသူတွေရဲ့ အလေ့အထများ
အသက် ၄၀ကျော်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ
ဝူဟန်မကလို့ ဝူဟန်အဖေပဲလာလာ Vitamin C များများသောက်ပေးပါ
Covid-19ရောဂါပိုးနဲ့သေမင်းကို မျက်လှည့်ပြလိုက်တဲ့ အသက်၉၅နှစ်အရွယ် အဘွားအိုတစ်ဦး
အွန်လိုင်းပေါ် ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့သတင်း မဟုတ်မှန်ဟုသိရှိရ
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အမေရိကန်မှာ မြန်မာ ၃ ဦး ဓါးနဲ့လိုက်ထိုးခံရ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဂိမ်းထဲမှာ သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့ ဂျပန် မူလတန်းကျောင်းသားများ
ဝူဟန်ကြောက်လို့ ဒီနေ့ကစပြီး ရုပ်ရှင်ရုံတွေအားလုံးကို အစိုးရက ပိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီ
Covid-19 ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး သွားလာမှု ပိတ်ဆို့ထားပေမဲ့ လသာဆောင်များကနေ တစ်ဆင့် ပျော်ပျော်ပါးပါး သီချင်းဆိုနေကြတဲ့ အီတလီနိုင်ငံသားများ
နာကျင်မှုမှာ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိသလား?
Health & Beauty938